အမိုက်စား အမူအယာလေးနဲ့ ပုရိသတို့အကြိုက် ချပြလိုက်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး မေမြင့်မိုရ်ရဲ့ စပါယ်ရှယ် ဗီဒီယိုလေး – Online News Post
အမိုက်စား အမူအယာလေးနဲ့ ပုရိသတို့အကြိုက် ချပြလိုက်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး မေမြင့်မိုရ်ရဲ့ စပါယ်ရှယ် ဗီဒီယိုလေး
By Cele MinPosted on February 26, 2021 February 26, 2021
မေမြင့်မိုရ် ဟာ ပုပ္ပါး မှာ အနားယူ အပန်း ဖြေ နေရင်း ရေချိုး ကန် ထက်မှာ အထာကျကျ ရိုက်ထားတဲ့ပုံ လေး တွေ ကို သူမရဲ့ Instagram acc မှာ တင်ပေး လာ ပါတယ် … .မေမြင့်မိုရ်လေး ရဲ့ အချိုး အစား ပြေပြစ် တဲ့ ဘော်ဒီ အချိုး အစား လေး နဲ့ အသား အရည် လေးဟာ လည်း မိန်း ကလေး တွေ တောင် ကြွေရတာ အမှန် ပါပဲ နော် … .ပရိသတ်တွေ အတွက် ပြန်လည်မျှဝေ ပေး လိုက်ပါ တယ် နော် … . ပန်းနုသွေး ဆို တဲ့ ဇာတ် ရုပ် လေးနဲ့ ပရိ သတ် တွေ စတင် သတိထား မိ လာခဲ့တဲ့ မေမြင့်မိုရ် ဟာ အခု လက်ရှိ ရုပ်ရှင် ကားကြီး တွေ ပါ ရိုက် ကူး နေရပြီ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် … .
အ မြဲ အေးအေး လေး နေထိုင် တတ် လေ့ ရှိတဲ့ မေလေး ဟာ သရုပ်ဆောင် ပိုင်း မှာ ဆိုရင် အပြစ် ပြော စရာမရှိ အောင် ကို ကြိုးစား လုပ် ဆောင် တတ် သူလေး ဆိုလည်း မမှာ းပါ ဘူးနော် … . မေမြင့်မိုရ် ပါဝင် ရိုက်ကူး ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်း တွေ ဟာ ဆိုရင် လည်း ပရိတ် သတ် တွေ ကြားမှာ အရမ်း ရေပန်းစား လေ့ ရှိပြီး နာမည် ကြီးတဲ့ ဇာတ်က ား ကောင်း တွေပဲ ဖြစ် ပါ တယ် … . မေမြင့်မိုရ် ဟာ အနုပညာ အလုပ်တွေ အပြင် ပရဟိတ အလုပ် တွေကိုလည်း လုပ်လေ့ရှိ သူဖြစ်ပြီး အနုပညာရှင် အချင်းချင်း ကြားမှာ လည်း ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်တဲ့သူ ဖြစ်တာကြောင့် လူချစ် လူခင် ပေါများတဲ့သူ လေးပါ နော်..။ မေမြင့်မိုရ် ဟာ အခုလက်ရှိမှာဆို ရင်လည်း ပုပ္ပါးကို ရောက် ရှိနေတာဖြစ် ပါ တယ် နော် … .
photo credit : May Myint Mo ’ s Instagram acc
ေမျမင့္မိုရ္ ဟာ ပုပၸါး မွာ အနားယူ အပန္း ေၿဖ ေနရင္း ေရခ်ိဳး ကန္ ထက္မွာ အထာက်က် ရိုက္ထားတဲ့ပုံ ေလး ေတြ ကို သူမရဲ့ Instagram acc မွာ တင္ေပး လာ ပါတယ္ … .ေမျမင့္မိုရ္ေလး ရဲ့ အခ်ိဳး အစား ေျပျပစ္ တဲ့ ေဘာ္ဒီ အခ်ိဳး အစား ေလး နဲ႔ အသား အရည္ ေလးဟာ လည္း မိန္း ကေလး ေတြ ေတာင္ ေႂကြရတာ အမွန္ ပါပဲ ေနာ္ … .ပရိသတ္ေတြ အတြက္ ျပန္လည္မၽွေဝ ေပး လိုက္ပါ တယ္ ေနာ္ … . ပန္းႏုေသြး ဆို တဲ့ ဇာတ္ ႐ုပ္ ေလးနဲ႔ ပရိ သတ္ ေတြ စတင္ သတိထား မိ လာခဲ့တဲ့ ေမျမင့္မိုရ္ ဟာ အခု လက္ရွိ ႐ုပ္ရွင္ ကားႀကီး ေတြ ပါ ရိုက္ ကူး ေနရၿပီ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ … .
အ ျမဲ ေအးေအး ေလး ေနထိုင္ တတ္ ေလ့ ရွိတဲ့ ေမေလး ဟာ သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္း မွာ ဆိုရင္ အျပစ္ ေျပာ စရာမရွိ ေအာင္ ကို ႀကိဳးစား လုပ္ ေဆာင္ တတ္ သူေလး ဆိုလည္း မမွာ းပါ ဘူးေနာ္ … . ေမျမင့္မိုရ္ ပါဝင္ ရိုက္ကူး ခဲ့တဲ့ ဇာတ္လမ္း ေတြ ဟာ ဆိုရင္ လည္း ပရိတ္ သတ္ ေတြ ၾကားမွာ အရမ္း ေရပန္းစား ေလ့ ရွိၿပီး နာမည္ ႀကီးတဲ့ ဇာတ္က ား ေကာင္း ေတြပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ … . ေမျမင့္မိုရ္ ဟာ အႏုပညာ အလုပ္ေတြ အျပင္ ပရဟိတ အလုပ္ ေတြကိုလည္း လုပ္ေလ့ရွိ သူျဖစ္ၿပီး အႏုပညာရွင္ အခ်င္းခ်င္း ၾကားမွာ လည္း ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္တဲ့သူ ျဖစ္တာေၾကာင့္ လူခ်စ္ လူခင္ ေပါမ်ားတဲ့သူ ေလးပါ ေနာ္..။ ေမျမင့္မိုရ္ ဟာ အခုလက္ရွိမွာဆို ရင္လည္း ပုပၸါးကို ေရာက္ ရွိေနတာျဖစ္ ပါ တယ္ ေနာ္ … .
Previous post ငြိမ်းအေးစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်နေကြတဲ့ လူထုကြီးကို ချစ်တီးထမင်း စတုဒီသာများနဲ့ ကျွေးမွေး အလှူပြုခဲ့တဲ့ အောင်လေး
Next post တတ်နိုင်တဲ့ဘက်အနေပြီးတော့ တိုင်းပြည်အတွက် အပင်ပန်းခံကာ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်နေတဲ့ ပြည်သူလူထုအတွက် အလှူလေးပြုလုပ်လိုက်တဲ့ လမင်းကဗျာ